LAHATSARY: ‘Miditra Demokrasia an-tSokosoko’ ao Loja, Ekoatera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2013 14:09 GMT
Ao Loja, tanàndehibe ao atsimon'i Ekoatera, mampiasa tambajotra sosialy hifampiseraserana amin'ireo mpitondra ny mpiserasera ary manolotra hevitra mivaingana hanatsarana ny toe-draharaha an-tanàndehibe.
Nampahafantatra ny lahatsary “Hackeando la democracia” [es] (Misovoka ao amin'ny demokrasia) tamin'ny alalan'ny Twitter ny fikambanana “Loja es Más” – na #LoxaEsMás [es] (mihoatra noho izany i Loja), niaraka tamin'ny fanohanan'ny Tetikasa Global Voices VideoActivo, lahatsary izay hiresahan'izy ireo amintsika bebe kokoa momba ny asan'izy ireo ao Loja.
Mitady hanangana fiaraha-monina demokratika ny “Loja es Más” izay tsy ny fifidianana [es] ihany no fomba handraisana anjara amin'izany.
Tao amin'ny bilaogy drw, linux, java y más.. [es], niaiky i Darwin Betancourt fa mora ny mitsikera, saingy nanamarika izy fa nametraka ny tantarany tamin'ny fampiasana tambajotra sosialy sy ny teknolojia ny tanànan'i Loja.
Mametraka tantara isika, fotoana hiovana sy fotoana hirotsahana an-tsehatra izao, fotoana hiasana tahaka ny RAHALAHY LEHIBE (BIG BROTHER) an'ny tanànantsika mitodi-doha indray ho amin'ny lalan'ny fandrosoana, tsy mila miandry mpanavotra na toy ny izany na ireo tompon'andraiki-panjakana tsaratsara kokoa na ratsiratsy kokoa noho ny hafa, mampiasa izay tsy maintsy ilaina isika hifandraisantsika mba tsy hilalaovan'ny media 1.0. antsika.
Samy mampiseho ny fanantenany sy fitokisany ny demokrasia nofinofisiny ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa maherin'ny 50, ka tsy isaina intsony ireo mpanaraka ny kaonty Twitter @loxaesmás [es] manodidina ny 2.500. Nankasitraka ny asan'ny #lojaesmás nahatratra ny fahaherintaonany i Denise Calle, tao amin'ny bilaoginy El alma de Campaniche [es] (Ny Fanahin'i Campaniche) ka nanoratra hoe:
Midadasika ny nofinofiko ho an'i Loxa… midadasika… mihoatra noho izay nieritreretako ny halehibeny, hagoavany, ho modelin'ity firenena ity…Ho ahy, izany no atao hoe #LoxaEsMas!!! Izany indrindra no hitolomako isan'andro, na aiza na aiza, herintaona lasa izay avy tao Quito, ary ankehitriny avy ao Latacunga. Ny tanjona dia, ny hitodi-doha sy hihalehibe… hihalehibe ao Loxa… hitolona ho an'i Loxa…
Carlos Correa, iray amin'ireo mpikarakara ny ‘hacks para Loja es Más’ [es] (mihoatra kokoa ny misokosoko ho an'i Loja), nanazava fa anarana namoronana ny tanàna tany amboalohany tamin'ny taona 1548 ny Loxa.
Nanazava [es] i Correa: “Ny tadiavintsika dia ny hahafantatra ny andraikitry ny tanàna tamin'ny nanorenana azy, mba hanomezana azy toerana lehibe ara-tantara indray sy hametrahana ny tetikasan'ny hoavy”- hetahetan'ireo mponina ao amin'ity tanànan'i Ekoatera ity, sy fanamby lehibe koa satria marobe ireo mponina mbola tsy manana aterineto.
Araka ny fanadihadiana avy amin'ny Sampan-draharaha misahana ny Antotan'isa sy ny Fanisam-bahoaka ao Ekoatera, dia nihena avy amin'ny 31,6 isan-jato tamin'ny taona 2011 ary lasa 29,5 isan-jato kosa tamin'ny taona 2012 ny fampiasàna aterineto tao Loja, izay mandahatra azy ho laharana fahasivy [es] amin'ny fampiasana aterineto ho fitaovam-pandefasana sy fahazoam-baovao raha oharina eo amin'ireo olo-pirenena Ekoateriana hafa.
Sioka nandritra ny tetikasa Twitter Callejero, mpandray anjara amin'ny #LoxaEsMás nalefa manerana ny tanàna. Sary avy amin'ny #LoxaEsMás tao amin'ny Flickr, nampiasana ny Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Na dia izany aza, nahomby tamin'ny fandefasana ny zanabolany [es] sy ny famoronana ny Ciudad Conocimiento [es] (Tanànan'ny Fahaizana) azy manokana i Ekoatera. Ankoatra izany, ahitana tetikasa tanàna maro tsy miankina amin'ny fanjakana ao Ekoatera, izay tsy misy idirana politika ary mikasa hanolo-kevitra ho an'ireo mpitondra ambony. Izany no tena fikasan'ny #loxaesmás.
Saingy mampiady hevitra ny karazana sy ny hamaroan'ny olona tratra mety hanana tetikasa miankina amin'ny tambajotra sosialy, satria tsy ny mponiny Loja rehetra no manana aterineto ary maro ihany koa ireo tsy mahafantatra ny dikan'ny hoe “miditra demokrasia an-tsokosoko”. Mba hamenoana izany, nanolo-kevitra hiainga avy amin'ny teoria sy ny tsikera ka mandeha mankany amin'ny asa sy fampiharana. Hoy ny lahatsoratra tao amin'ny El Comercio [es]
Anatin'ireo tolo-kevitra ny fahaiza-mamaky teny nomerika, ahitana kilasy fampianarana teknolojia maimai-poana ho an'ireo mpianatra sahirana. Tetikasa hafa ihany koa ny famoronana fandaharan'asa nomerika ho an'izay ben'ny tanàna manaraka ao Loja. Amin'ireo tetikasa ireo, misy ny fampiroboroboana ny fiseraserana an'aterineto, fampandrosoana ny toekarena nomerikan'ny fandraharahana sy fanohanana ny teknolojian'ny vaovao sy ny fifandraisana.
“Iray amin'ireo fitaovana hanatanterahana ny fandraisan'anjaran'ny daholobe ny fampianarana hahay aterineto (Web literacy) “, hoy i Mario Andrés Correa [es], ‘geek’ sy mpandray anjara amin'ny tetikasa.
Jeff Gotfredson nametraka ny dika an-tsoratra ny lahatsary tao amin'ity lahatsoratra ity.